Ikhekhelethi njengento yokumangalisa
Kuza kube namhlanje, ihlabathi liyi-chocobum yangempela! Abakhiqizi abaninzi bezityalo baziqulunqa zonke iintlobo zeekram, i-shampoos, iigel kunye neezongezo zebhotela kunye ne-cocoa. Nangona inkokeli engathandabuzekiyo ye-cosmetology yanamhlanje - ioli yembewu yamagilebhisi - iye yamkela indawo yokuqala ehloniphekileyo kwiphokoleta. Kwaye konke oku kwenzekayo, ngenxa yokuba ihlaseli layo lehlabathi liqala. Ikhekhelethi ngoku yenza inxaxheba ekungabonakali nje nge-dessert eyimnandi, kodwa kwakhona njengento yokumangalisa imimangaliso.
Wonke ummeli wamanqweno omhle kufuneka 'atyebe' umzimba wakhe (ngokomqondo kunye nangokomfuziselo wegama) kunye necolethi. Khetha: ukhilimu obusweni, umzimba, kunye nesiphumo sokuphakamisa isifuba kunye nommandla we-décolleté, i-gels yokucoca ubuso, i-shampoos, iimpawu zezokwelapha zeenwele, iimveliso ezichasene ne-cellulite. "Ngaba lo awukho umvuzo kwifashoni yanamhlanje?" - zibuze umbuzo. Zigweba wena, kuba iziphumo zeembotyi zee-cocoa ziyakwenza oku kulandelayo:
ukukhusela ulusu ukuze ukhuphe ukuguga kwangaphambili, ukugcina ubutsha nobuhle bayo;
ukunceda iiseli zesikhumba ukuba ziphucule amandla, okuyimfuneko ukuze kugcinwe iqondo elifanelekileyo lokunyaniseka kunye nokunyaniseka;
sebenzisa iinkqubo zesisombululo kwiiseli kunye nezicubu, ngaloo ndlela zikhupha isikhumba kwiintlobo ezimbi kwaye zivumela ukuba ziphefumle ngokukhululekile;
ubuyisele ibhalansi yamanzi yolusu, ugcine umswakama;
ukugqithisa imibimbi kunye namanqaku atyhidiweyo elukhumbeni.
Ngaba uyavuma ukuba uluhlu lwezinto eziphathekayo ze-tshokoleta libukeka luhle kakhulu? Ngaphezu koko, nganye intombazana iyavuma ukuba kuyinto enhle kakhulu ukubeka ubuso obuncwane obuhle, kunokuba ungcolile okanye ungciniweyo. Ngelinye igama, ubomi kwi-tsholatshi akuyona nje into ecolileyo kwaye enamakha, kodwa inokubaluleka kakhulu ukugcina ubuhle nobukhulu!
Ziphathe ngokwakho kwinkqubo yetshokolethi ngqo ekhaya. Udinga ibrashile nge-brush ekhethekileyo. Sithatha kwaye sisebenzise isikhumba esihlambulukileyo ngoncedo lwe tshoktile esandulela i-tshutshi ngaphambili kwaye sibambe imaski de ibe yome. Ukuze ukwandise isiphumo sondlo, unokudibanisa ushokoledi oncibilikisiwe kunye neqanda leqanda.
Kanye kunye ne-skosmetikoy ukusetyenziswa kwekhaya, kukho iinkqubo ezikhethekileyo ze-chocolate. Ngendlela, enye yazo iyakwazi ukwahlukana njengenye yezona zinto zihle kakhulu: umzimba we-tshokoleji kunye nokuxutywa ubuso. I-massage ye-massage, njengomthetho, yenza ngesandla, ngelixa isebenzisa i-tshilothi efunekayo. Kuya kuba kufanelekile ukuba uqaphele ukuba kwi-cosmetology kuyisiko ukusebenzisa uhlobo olukhethekileyo lwe-tsholeta, apho ekubunjweni kwayo ayinazo izongezo. Yenziwe yendalo yemvelo yendalo. Nangona kunjalo, le ntlupheko inokuthelekiswa, mhlawumbi, ngokunxulumene ne-aromatherapy, i-lymphatic drainage. Ukuxilisa kufana nokuhlanjululwa kwesikhumba. Emva koko, amaphuzu ngamnye kunye neendawo ezixhatshazwayo emzimbeni kunye nobuso, obonelela ngokuphumayo, kukhupha ukunikezelwa kwegazi kunye nokuphucula ukutya okunomsoco. Ukuphuhliswa kwezihlunu kuqhutyelwa kwinqanaba elincinci kwaye lincinci kwaye emva kokuba le tshokolethi isetyenziswe esikhumbeni ngesimo semaski. Olu luhlu lweenkqubo luqinisekisa ukuba isikhumba sakho sinokulungele ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa.
Kwakhona, i-tshokoleji isetyenziselwa ukufaka. Ezi zixhobo zikunceda ukunciphisa ama-pounds angaphezulu, kunye nokwandisa ukunyaniseka kunye nefuthe lesikhumba. Baye baninzi ukuphathwa kweenwele (ukunyusa, ukutya okunzulu, ukulwa neengxaki zesikhumba sentloko).
Zonke iziqheno zithi ngezwi elilodwa i-tsholetele inempahla ene-energy-saturated butting, kunye ne-cosmetics, xa isetyenziswe kakuhle, idlala indima yenkqubo enamandla yokulwa noxinzelelo nokuvuselela. Akungento yinto encinci ityutyushwa kunabantu abanokubanda, abantu abanesifo sokungazinzi, ukuxinezeleka, kunye nabafundi abathabatha iimviwo. Oomama abancinci ngexesha le-chocolates yinyani yamandla. Kodwa kukufanelekile ukukhumbula ukuba i-tshokoleta, kuquka iimveliso zokuzicoca, ezibandakanya, inenani leenkcazo zayo. Ngokomzekelo, ukuba unesifo se-eczema, i-dermatitis okanye nayiphi na esinye isifo esinxulumene nesikhumba, kwaye ukuba unesifo, kufuneka ungabandakanyi nxamnye nalolu luhlobo olumnandi nje kuphela ekudleni kwakho, kodwa nangendlela yokucebisa.
Masks ebusweni busika ekhaya
Ukuhlaziya ubuso kunye nentamo yentamo ekhaya
Ukunyamekela kolukhuseleko: iingcebiso ze-cosmetologists
I-endoscopic facelift (facelift)
Indlela yokuphucula umbala
Indlela yokukhetha inja kwaye uyayiqonda ukuba iyakho?
Iipilates: Imisebenzi yokubuyisela
Uthando lwebali lika Kurt Cobain kunye neNkundla yeNkundla
Ikhekhe le Banana
Umehluko phakathi kokutya ngosuku loqeqesho kunye nangomhla wokuphumla
Ingaba kunika umntwana umntwana okhulile
Iintsholongwane zee-antibiotics zentsebenzo emithathu
Izibikezelo zonyaka omtsha ezithakazelisayo
Kutheni ungayi kwibhokisi-imeko kunye nento oyenzayo ngayo: 3 iimfihlo zabasetyhini befashoni
U-Natalia Podolskaya waqhayisa umntu kwi-bikini
Baqala nini ukuthetha?
Inkukhu kubantwana: unyango, iimpawu
Indlela yokubonakalisa uthando lwakho kumthandayo?
Indlela yokukhulelwa ukuba ibe mnandi?